Diandalana fitetezana - Matthieu Grobli - Afrikhepri Fondation
alakamisy 14 aprily 2021
Fifandraisana BOKY VOALAZA
Dia mialoha - Matthieu Grobli
1 min mamaky
TheLehilahy iray mitady ny fisiana, mandeha eo ambonin'ny ranomasina midadasika izy, izay misy fihetsiketsehana mihoampampana, ilaina ary lahatra mamolavola ny rafitry ny zava-niainany. Taorian'ilay oram-baratra sy oram-baratra dia nisy tara-masoandro vitsivitsy niseho teo anelanelan'ny rahona ka namaky ny rano indray mitete amina loko maro loko izay nihaona tamina avana mahafinaritra.
Ity fitsangatsanganana ity dia nanjary fitsangatsanganana voalohany ho amin'ny famotsorana ny fanahy izay, babo ny zavatra, avy eo dia niditra tao amin'ny fahatsiarovan-tena ambony.
Noho izany, afaka amin'ny fanahiany, ny tahony ary ny fisalasalany ny omaly sy rahampitso, miaina manokana amin'izao andro ankehitriny izao, ny fisiany dia lasa toy ny ranomasina mangarahara tsy misy mivonto na onja.
Taorian'ny nanipazan'ny rivotra toy ny sombin-kazo mahatsiravina tamin'ny lehilahy tsy nahatsiaro tena dia niditra tao amin'ny saha an'ohatra tamin'ny alàlan'ny Renaissance sy ny Fitsanganana amin'ny maty amin'ny rafitra misy hafa.
Vidio € 8,48
Nohavaozina farany tamin'ny 14 aprily 2021 9:56 maraina
Ny sublimation ny filalaovana
Hijery anay (2019)
Vitamin B17: fanasitranana mahomby ho an'ny homamiadana
Hijery ny Aquaman (2018)
Ilay marika famantarana an'i Kristy na mpanondro?